बाहिरिँदै साग खेलकुदको भ्रष्टाचार : खेलाडीको जुत्ता र र्‍याकेटमै अनियमितता
सराेज तामाङ शनिबार, भदौ ६, २०७७, १०:५६
काठमाडौं- १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिता सकिएको नौ महिना बितिसकेको छ। सरकारको प्रमुख उपलब्धीमा परेको साग आयोजनामा लुकेका कतिपय बिषय विस्तारै बाहिर आउन थालेका छन्। त्यसमध्ये एक हो- खेल सामग्री खरिदमा भएको आर्थिक अनियमितता।
सागमा ब्याडमिन्टन खेलाडीको जुत्ता खरिदका लागि मात्र २ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। जब कि सागका बेला नयाँ जुत्ता नपाएका खेलाडीहरुले किनिएको भनिएको जुत्ता अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन्। अनुदानमा आएको म्याटको बिल बनाएर रकम कुम्ल्याइएको छ। १७ हजार रुपैयाँको र्‍याकेट किनेको बिल बनाएर ६ हजारको र्‍याकेट भिडाइएको देखिन्छ।
सागमा अनियमितता भएको र आर्थिक हिनामिना भएको आवाज पहिलेदेखि नै उठे पनि अहिले संघहरु त्यसबेलाको खेल सामग्री खरिदको हिनामिनाबारे बोल्न थालेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल ब्याडमिन्टन संघका खेलाडीका लागि सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ। यसको केन्द्रमा छन्, तत्कालै राजीनामा दिएका उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठ।
साग सकिएको यत्तिका समयमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आर्थिक विबरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। स्वागत र सम्मानमा तामझामका साथ ठूला कार्यक्रम सकाइसक्दा पनि सागको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न कोरोना माहामारीलाई कारण देखाउँदै राखेप पन्छिरहेको छ। राखेप स्रोत हिसाब किताब मिल्ने गरी देखाउन सकिने नै नभएकाले ढिलो भइरहेको बताउँछ।
यहि चर्चा र चासोको विषयमा साग खेलकुदमा ब्याडमिन्टनका खेलाडीको खेल सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु बाहिर आउन थालेको छ। यसमा तानिएका छन् साग खेलकुदको ‘खेल स्थल ब्यवस्थापन समिति’ का सचिव समेत रहेका लवभक्त श्रेष्ठ।
साग खेलकुदको समयमा विभिन्न शीर्षकमा ब्याडमिन्टन खेलाडीले पाउनु पर्ने सामग्रीमा उनीमार्फत आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। खेलाडीको लागि सागमा जुत्ता, र्‍याकेट, म्याट लगायतका सामग्रीमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको ब्याडमिन्टन संघकै पदाधिकारीले बताइरहेका छन्।
सुवास श्रेष्ठ नेपाल ब्याडमिन्टन संघका उपाध्यक्ष हुन्। अहिले उनी राखेपका बोर्ड सदस्य पनि छन्। उनले लामो समयदेखि ब्याडमिन्टन संघमा खेलाडीको लागि आएको सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए।
संघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राखेप बोर्ड सदस्य सुवास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘म ब्याडमिन्टन संघको उपाध्यक्ष हुँदा पनि धेरै पटक कुरा उठाएँ। १३औं सागमा धेरै कुरामा भ्रष्टाचार भएको छ। दोषीलाई कारबाही हुनु पर्छ।’
जुत्ता र र्‍याकेटमा भ्रष्टाचार
साग खेलकुदमा खेलाडीको लागि जुत्ता, र्‍याकेट लगायतका शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। २७ जना ब्याडमिन्टन खेलाडीको लागि राखेपबाट २७ जोर जुत्ताको लागि प्रतिजोर १० हजारको दरले बजेट निकाशा भएको देखिन्छ। तर साग खेलकुद सकिएको नौ महिनासम्म पनि खेलाडीले जुत्ता पाएका छैनन्।
स्रोत भन्छ- ‘लवभक्तले खेलाडीको जुत्ताको लागि छुट्टाएको पैसा खाए। राखेपबाट प्रति जोर १० हजारको दरले जुत्ताको पैसा लगेका छन्। तर पटक पटक कुरा उठाउँदा ५ हजारको दरले पैसा राजु बास्तोलालाई पठाएछन्। ८ महिनासम्म खेलाडीलाई जुत्ता दिइएन।’
सुरुवाती समयदेखि नै भ्रष्टाचार भयो भनेर कुरा उठाउँदै आएका बोर्ड सदस्य सुवास श्रेष्ठ पनि १३औं सागमा खेलाडीको जुत्तामा छुट्टाएको पैसामा चलखेल भएको बताउँछन्। खेलाडीले अहिलेसम्म जुत्ता त पाएनन्। जुत्ताको पैसा पनि पाएका छैनन्।
अर्को अनियमितता हो, ब्याडमिन्टन र्‍याकेटमा। सरकारले २० जना ब्याडमिन्टन खेलाडीलाई र्‍याकेटको लागि बजेट निकाशा गरेको थियो। राखेपबाट प्रति र्‍याकेट १५ देखि १७ हजार रुपैयाँको दरले २० थानको बजेट छुट्याएको देखिन्छ।
राखेपबाट तोकिएकै मूल्य बराबरको र्‍याकेट खेलाडीले पाउनु पर्ने हो। तर खेलाडीले ५ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको कम गुणस्तरको र्‍याकेट पाएका छन्। ‘खेलाडीलाई ५ देखि ६ हजारको र्‍याकेट दिइएको छ। र्‍याकेट चाहिँ खेलाडीलाई दिइसकेको छ। २० थान र्‍याकेट। तर बच्चाले खेल्ने जस्तो छ’, स्रोतले भन्यो।
जुत्ता र र्‍याकेटमा मात्र होइन अनियमितता म्याटमा पनि भएको देखिन्छ। अनुदानको रुपमा आएको म्याट बिल बनाएर पेस गरी पैसा लिएको आरोप छ।
तर लवभक्त श्रेष्ठ भने एक पैसा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्- ‘ममाथि लगाइएको आरोप सबै झुटा हुन्। म टिम व्यवस्थापक पनि होइन। मैले जिम्मेवारी नै लिएको थिइनँ त कसरी गर्न सक्छु भ्रष्टाचार? छानविन समिति गठन भएको छ। धेरै बोली रहनु पर्दैन। जे गर्छ छानविन समितिले गर्छ।’
संघको उपमहासचिव पदमा रहेका ब्यक्तिमाथि आरोप लाग्दै यति धेरै चलखेल देखिँदासमेत संघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव चाहिँ चुपचाप किन? त्यसबेला नै किन आवाज उठेन?
केही दिन अघि मात्रै राखेप बोर्ड सदस्य भएका संघका उपाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले खेलस्थल व्यवस्थापन समितिका सचिव लवभक्त श्रेष्ठ भएको कारण सबै हालीमुहाली उनकै हातमा भएको बताउँछन्। ‘लवभक्त चाहिँ सागको समितिमा थिए। त्यही भएर उनले आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोजेका हुन्। १३औं सागको समितिमा हामी त केही थिएनौं।’
भ्रष्टाचारको आरोपपछि लवभक्त श्रेष्ठले केही दिनअघि उपमहासचिव पदबाट राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा मात्रै होइन, उनले गल्ति भएको भन्दै माफीसमेत मागेका छन्।
१७ लाख काण्ड अख्तियारमा
लवभक्त श्रेष्ठ मोरङ जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका सचिव हुन्। उनी विवादमा तानिएको यो पहिलो काण्ड भने होइन।
झण्डै दुई वर्षअघि मोरङ जिल्ला ब्याडमिन्टन संघले जुनियर प्रतियोगिता आयोजना गर्न १७ लाख रुपैयाँ बजेट निकाशा गर्यो। तर त्यहाँ अनियमितता देखियो। लवभक्त श्रेष्ठ लगायतका पक्षबाट आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिल्ला संघकै पदाधिकारीले मुद्दा हाले। अख्तियारले मोरङ जिल्ला संघलाई पत्र नै काटेको छ। अहिले त्यसमा अनुसन्धान भइरहेको बताइन्छ।
त्यसबाहेक पनिम खेलाडी छनोटमा पैसा खाएकोदेखि अमेरिका जाँदा संघबाट लिएको पैसा अझै चुक्ता गरिनसकेको आरोप छ।
सुवास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खेलाडी छनोटको पैसादेखि अमेरिका जाँदासम्म लवभक्त श्रेष्ठले पैसा खाएका छन्। अमेरिका जाँदा उनले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ संघको पैसा लगे। मैले समाते। अझै पनि त्यो पुरै पैसा फिर्ता भएको छैन।’
सबै विषय बाहिरिएपछि राखेपले साग खेलकुदको दौरान सामान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। ब्याडमिन्टन खेलमा खेलाडीको लागि सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा राखेप बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो।
छानविन समितिको सदस्यमा तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका प्रमुख अर्जुनबहादुर बिक, राष्ट्रिय टिम तयारीका प्रमुख महेन्द्रकुमार राई, कानून शाखा प्रमुख नारायण अर्‍याल र लेखा अधिकृत पासाङ शेर्पा छन्।
समितिले २१ दिनभित्र छानबिन गरी सत्य तथ्यसहित प्रतिवेदन राखेपमा बुझाउनु पर्नेछ।
छानविन समितिले कार्यविधि बनाएर कामको बाँडफाड समेत गरिसकेको संयोजक गोविन्द भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘पहिलो बैठकमा हामीले कार्यविधि बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाड गरेका छौं। सत्य तथ्य के हो? हामी अनुसन्धान गर्छौं। आइतबारदेखि डकुमेन्टहरु मगाउँछौं। अध्ययन गर्छौं। अब भेटेर कुरा गर्ने, अनुसन्धान गर्ने त यो बन्द हटेपछि मात्रै हो।’
अहिले ब्याडमिन्टनको विषय मात्र बाहिरिएर त्यसमा सुरु भएको छानबिन अन्य उजुरीहरु परेमा सबै छानबिन हुने बताइएको छ। ब्याडमिन्टन खेलाडीहरुले आफूहरुले भनिएको खेल सामग्री नपाएको भनेर उजुरी दिएपछि बाहिरिएको भ्रष्टाचारको विषय अरु खेलाडीका लागि पनि आवाज उठाउने पहल कदमी भएको खेलाडीहरु बताउँछन्।